တက္ကသိုလ်များအတွက်အတညျပွုလျှောက်လွှာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် Exposition လိုအပ်. ဤရွေ့ကားစာတမ်းများအကြီးအခွဲနှင့်မယုံနိုင်စရာခွဲအပေါ်အခြေချရန်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း. တက္ကသိုလ်များဟာသူတို့ရဲ့ရုပ်ပုံလွှာကိုထောကျပံ့မညျဖွစျကွောငျးခွဲရှာဖွေနေကြပါတယ်. တစ်ကျောင်းတစ်စင်ကြယ်သန့်ရှင်းသောထိုက်လိမ့်မယ်လို့သေချာခွဲရှိပါသည်သို့သော်သူတို့ရိုးရိုးအနည်းငယ်ဆောင်းပါးအကူအညီနဲ့လိုအပ်.
ကောင်းပြီပြန်ပြောပြပုံပြင်များရိုးရှင်းစွာအရာတစ်ခုခုကိုဖော်ပြဘာမှထက်သာလွန်သည့် peruser ရဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားလုပါလိမ့်မယ်. ဤသည်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများဆုံးလူသိများတဲ့အမှားကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေဟာသူတို့ရဲ့အတည်ပြုချက် Exposition အပေါ်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်. တစ်ဦးသည်အသက်ခြောက်ဆယ်ပေါင်အလေးချိန်လျှော့ချနေတဲ့လူကိုပြောပါဖို့ကြိုးစားနေထက် peruser ဖို့ပိုစိတ်ရင်းမှန်နဲ့အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သတိပေးခံရသောလိမ္မာပါးနပ်ဖော်ကျူးဖို့လုံ့လဝီရိယဖြစ်ပါသည်.
ကောငျး COLLEGE ဝင်ခွင့်များစာစီစာကုံးဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတာ
တစ်ခွဲကိုမြေကြီးအကြောင်းကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်ကြောင်း ဖော်ပြ. တဦးတည်းအရာဖြစ်ပါသည်. အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်လမ်းကိုပြောင်းလဲသွားစေတဲ့အကျိုးတူန်းကျင်ပြောပြလုံးဝကွဲပြားခြားနားသည်. ဇာတ်လမ်းပြန်ပြောင်းပြောပြသည့်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ထွက် sorting ပတ်သက်. peruser ပြောထားသည်. ဒါဟာပိုင်ဆိုင်မှုများ၏တီထွင်အသုံးချ ပတ်သက်. peruser ပြောထားသည်.
တစ်ခုကစိတ်အားထက်သန်ခွဲနေတဲ့ထူးခြားတဲ့ compose ပါလိမ့်မယ်, ပါဝငျဆောင်းပါး. ဘာမှမအကြောင်းကိုလုံ့လရှိသူမဟုတျကွောငျးတခုခွဲ. တစ်ခုခုမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ခြင်းအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသိမ်းယူသောအရာကိုမဖြစ်. ဒါဟာ rouses ကြောင်းအောငျမွငျလစိန်ခေါ်မှုများအတွက် Self-အသိအမြင်ဖြစ်ပါသည်. ကြွင်းသောအရာရှိသည်မယ်လို့အခါအကောင်းဆုံး Exposition ၏အဘို့ကိုရိုးရှင်းစွာရပ်တန့်မပုံမှန်စွမ်းရည်နှင့်အတူအကြောင်းကိုသာမန်ခွဲများမှာ.
အကောင်းဆုံးဆောင်းပါးများကိုပြတ်သားများမှာ. စိတျထဲမှာသိမ်းဆည်းထားပါ, လူတိုင်းအာရုံစိုက်ဖို့ကန့်သတ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်. အတညျပွုဆောင်းပါးများကိုမှန်မှန်စကားလုံးကန့်သတ်ပြီ; သူတို့ကိုမှတ်. ပြောမယ့်ကြီးမြတ်သဘောတူညီချက်ရှိမယ့်အခါ, compose မှတစ်ဦးကလျောက်ပတ်သောချဉ်းကပ်နည်း, လက်နက်ဖြစ်၏စကားလုံးများကိုအသုံးချဖို့စက္ကူ compose ထိုနောက်မှဆုတ်ခွာခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲပစ်ရန်ဖြစ်ပါသည်.
အခါတိုင်းပြောင်းလဲ, တဦးတည်းမူလတန်းဇာတ်ကောင်အရည်အသွေးပေါ်အာရုံစူးစိုက်. ဘဝကအမျိုးမျိုးသောအမြင်များထံမှတစ်ဦးချင်းစီကိုပြောင်းလဲ; တစ်ဦးတိုက်ပိတ်အခါသမယတစ်ခုသာတိုက်ပိတ်အခါသမယဘယ်တော့မှမဖြစ်. တစ်ဦးအခါသမယ၏အရှိဆုံးအရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းနှင့်အရေးအကြီးဆုံးရလဒ်အသိအမှတ်မပြုရန်ကြိုးပမ်းမှု. ဇာတ်လမ်း unfurls အဖြစ်ဤအပေါ်အာရုံစူးစိုက်.
ဘတ်: ထိပ်တန်း6အကောင်းဆုံးစာစီစာကုံးရေးရန်စေရန်မည်သို့တွင်သိကောင်းစရာများ
အဆိုပါ peruser ရဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားလုဖို့နောက်ထပ်အလွန်ကြီးစွာသောချဉ်းကပ်မမြင်နိုင်တဲ့သောအတွေးရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါ Exposition အမှန်တကယ်အကြောင်းအရာကိုပတ်သတ်ပြီးဘာမှမပြောပါဘူးတဲ့ဇာတ်လမ်းနှင့်အတူစက္ကူကိုစတင်. ရိုးရှင်းစွာတစ်ဦးအခါသမယပုံဖော်နေဖြင့်အခင်းဖြစ်ပွားရာ Set. ထိုအခြိနျတှငျ, ထိုအခါသမယအကြောင်းကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုခုကိုအာရုံစိုက်ဖုန်းခေါ်ရှေ့ဆက်သွားရ. ရှည်လျားသောနောက်ဆုံးမှာ, ၏တစ်ဦးချင်းစီ Essentials ရှင်းလင်း. အဆိုပါအားလုံးပိုမိုသင့်လျော်သောသမားရိုးကျအရာတစ်ခုခုသည်, ပိုအံ့သြကြောင့်ဖြစ်ရနိုင်.
မြောက်မြားစွာခွဲသူတို့ထူးမြတ်သောဖြစ်ကြသည်ကဲ့သို့မြည်ကြောင်း Exposition compose. ဤရွေ့ကားခွဲဆောင်းပါးအကူအညီနဲ့တစ်ဦးစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအတိုင်းအတာလိုအပ်! အဘယ်သူမျှမနေတဲ့ Self-အသိအမှတ်ပြု Monolog ကိုသုံးထားတဲ့အတွက် perusing တန်ဖိုးထား. တစ်ဦးရဲ့အထောက်အထား attribute ကို delineates တဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်နေရသည်က peruser ဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်သလဲဆိုတာရှင်းလင်း. ကြီးစွာသောဘာသာစကားဖွဲ့စည်းပုံနှင့်စာလုံးပေါင်းစိတျထဲမှာသိမ်းဆည်းထားပါ, ဖြစ်စေ!
THE အက်ဆေးအခြေခံ FORMAT နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာ
« တစ်ဦးကအနိုင်ရ COLLEGE APPLICATION သို့အက်ဆေးဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတာ?